व्यवसायिक कागती खेती गर्दै हुनुहुन्छ ? एक पटक यो पढनुहोस - कृषि डेली
Home banner व्यवसायिक कागती खेती गर्दै हुनुहुन्छ ? एक पटक यो पढनुहोस
व्यवसायिक कागती खेती गर्दै हुनुहुन्छ ? एक पटक यो पढनुहोस
काठमाडौं – पछिल्लो समय नेपालमा पनि कागतिको व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको छ । भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने र स्वास्थ्यका अन्य दृष्टिबाट पनि लाभदायक मानिने भएकाले यसको प्रयोगमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
यसैको परिणामा किसानहरु कागतिको व्यवसायिक उत्पादनमा आर्कषित भएका छन् । तर इच्छा भऐ र पनि कागतिको राम्रो उत्पादन हुन नसक्दा किसान चिन्तित पनि हुने गरेको पाइन्छ । हामीले यीनै पक्षलाई ध्यानमा राखेर कागती खेती गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र गर्नुपर्ने काम उल्लेख गरेका छौ ।
कागतीको विरुवा रोप्न के कस्तो तयारी गर्नु पर्छ ?
खाडल कहिले भर्ने र विरुवा कहिले रोप्ने ?
जेठ महिना भित्र खाडल भर्ने र आषाढ महिनाम रोप्ने ।
कागतीमा लाग्ने रोगहरु नियन्त्रणका मुख्य उपायहरु बगैचा सफा राख्ने, हिउदमा बोटका सुकेका हांगाबिंगाहरुको कांटछांट गरि हटाउने, कपरअक्साईड ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा झोल बनाई कांटछांट पछी छर्ने र फेद वरिपरी सफा पारी १ देखि १.५ हातसम्म बोडो पेष्टले लिपी दिने ।
कागतीमा लाग्ने रोगहरु क्याइंकर, कालो ध्वासे, कोत्रे, जडा कुहीने, फेद कुहीने, गुलाबी रोग ग्रिनिगं मुख्य हुन ।
कागतीको मिलिबग किरा नियन्त्रण गर्न इमिडाकोलपिट ०.२ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा झोल बनाई छर्ने ।
कागतीको लाही र सिट्रस सिल्ला किरा नियन्त्रण गर्न फुल फल्नु अगाडी रोगर ३० प्रतिशत इसि १ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
कागतीमा लाग्ने किरा ठुलो पुतली र पातको झिंगालाई नियन्त्रण गर्न डेल्ट्रामेथ्रिन २८ प्रतिशत इसि २ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
कागतीमा लाग्ने मुख्य मुख्य किराहरु हरियो ठुलो पुतली, पातको झिंगा, कतले किरा, लाही किरा, सिट्रस सिल्ला, फल कुहाउने औंसा र मिली बग हुन ।
व्यवसायीक बगैंचा स्थापना गर्दा ३ह३ मीटरको दुरीमा विरुवा रोप्नु पर्दछ ।
Previous articleस्मार्ट कृषि गाउँ निर्माणमा जुटेको प्रदेश ५ लाई नजिकबाट चिन्नुहोस
Next articleचितवन दूधमा आत्मनिर्भर